Isivumelwano sokusebenzisana kwezinhlangano zaboHlanga eNingizimu Afrika - Bayede News
Sekuyavela ukuthi bazuzani asebeqome i-Israel kunePalestine
Selokhu inhlangano ebusayo ithathe ihlandla lesithupha umbuso, kunento ebonakala ifufusa, futhi kamumva nje iyagalawela. Lokhu ukubuyelwa ngamandla kwabamhlophe kwezomnotho.
Ababuyelwa nje kuphela amandla ezinkampanini zabo ezizimele, kepha babonakala bebuyelwa ngamandla nasezinkampanini zikaHulumeni. Iningi laboHlanga ababephethe ngaphambilini, babonakala behlehlela nyovane kumbe beshushiswa esithangamini sikaMehluleli uZondo. Lokhu kwakha isithombe esingesihle ngoguquko obelulindelekile ngaboHlanga, obekufuze ngabe sebekwelenyoni ezigabeni zonke zezemisebenzi.
Kanti okunye okubonakala kubayitulo, ukuhlongozwa kokudayiswa kwezinkampani ezingaphansi kukaHulumeni, zidayiselwa izimboni ezizimele. Lokhu kwenzeka ngaphansi kweso likaHulumeni oyedwa. Lokhu sekudale esikhulu isikhalo kusuka kwaSAA, kwa-ACSA nakwezinye eziningi izinkampani.
Inqubo ethi nxa izinkampani zikaHulumeni zithengiselwa izinkampani ezizimele zenza kahle, ibonakala kuyiyona edla umunyu kosopolitiki. Yize kunzima ukukholwa abakushoyo kwazise kubonakale ngaphambilini nxa bethatha izinqumo ezinje ukuthi basuke bembobo ezinqumweni abazithathayo.
Lapha singenza isibonelo sakwaTelkom SA nabanye osopolitiki abaphuma maqede bayimba ekhaleni lobusheya emuva kokwenza izinqumo ezavuna bona.
Yingakho ngeviki eledlule kuye kwathi izinyunyana nezinye izinhlangano zamasonto zathatha isinqumo esinqala sokuthi zishicilele isivumelwano sensebenziswano phakathi kwazo.
Lesi sivumelwano sizobe sibhekele ukuthi ihlangane yonke imihlathi eyazanayo, kuqoqwe imali kubantu baseNingizimu Afrika ngaphansi kohlelo oluthi alube yisitokofela.
Lolu hlelo luzothi lusize imiphakathi yase Ningizimu Afrika ukuthi ikwazi ukubanamasheya ezinkampani ebezizodayiselwa amazwe angaphandle.
Phakathi kwezinhlangano ezishicilele lesi sivumelwano, singabala lezi ezilandelayo, iCosatu, iNumsa, iSaftu, iNafcoc, iSantaco, iHhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal, iLandile Shembe Foundation, iNehawu, i- Achib nezinye.
Ukufufusa nempumelelo yalesi sivumelwano ingaletha olukhulu uguquko emnothweni waseNingizimu Afrika jikelele.
nguGugulethu Xaba Feb 26, 2021